Bangase badonse kanzima abezimoto ngoMeyi | News24
Bangase badonse kanzima abezimoto ngoMeyi
Cape Town – I-Automobile Association (AA) iqagula ukuthi intengo kaphethiloli ingase inyuke ngo-55c ilitha ngoMeyi, udizili unyuke ngo-39c ilitha, bese kuthi uparafini wona unyuke ngo-41c ilitha.
Abakwa AA bathi ukunyuka kwentengo kaphethileli okuqagulwayo kuzoba okukuqala ukushaya kubantu bakuleli njengoba irandi lilokhu liqhubekile nokuntengantenga uma ngabe liqhathaniswa nedola laseMelika, nosekube nomthelela entengweni kaphethiloli emazweni omhlaba.
OLUNYE UDABA: Ungase unyuke ngo-R2 uphethiloli ngo-Ephreli
Kodwa-ke abakwa AA bathi ukuntengantenga kwamandla erandi yikhona okuzoba nomthelela ekwehleni kwentengo kaphethiloli, bathi ukunyuka kwentengo kaphethiloli emazweni omhlaba khona kube nomthelela omncane.
Ukwehlelwa umdlandla kwabatshali bezimali kwiNingizimu Afrika, ukwehliselwa esigabeni esiphansi sezinga lomnotho wakuleli, yiFitch kanye neS&P sekuholele ekutheni irandi lisuke ku-R12.35 ngaseqaleni kwenyanga, laze lafinyelela ku-R13.40 njengamanje.
Kodwa-ke noma kunjalo abakwa AA bathi siseside isikhathi esisasele ngaphambi kokuba kube uMeyi, bathi kungenzeka ukuthi izinto ziyobe sezishintshile ngaleso sikhathi.